Nanjakan’ny Mosary ny Fahazazany Tao Etiopia. Ankehitriny, Hitany Fa Lany Indray ny Sakafo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 9:26 GMT
Abebe Haregewoin (eo ankavanana) sy ny rainy, tao Etiopia. Sary: Abebe Haregewoin
Navoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 5 May 2016 ity lahatsoratra nosoratan'i Joyce Hackel ity, ary naverina navoaka eto indray anatin'ny fifanekena amin'ny fizaràna vontoaty.
Manana ny fomba itoerany eo anilanao mandritra ny androm-piainanao ny toerana izay nahalehibe anao.
Mahalala io fihetseham-po io i Abebe.
Manampahaizana mikasika ny fitsaboana ny homamiadana ao Silver Spring izy, tanàna iray ao amin'ny fanjakan'i Maryland, ao Amerika. Saingy tao Etiopia izy no nihalehibe ary niaina tany Addis-Abebà raha niantraika tao amin'ny Tandrok'i Afrika ny mosary tamin'ny taona 1970 sy 1980.
Lasa saina matetika momba izany izy amin'izao raha mizotra mankany amin'ny “vanim-potoana saozanina” i Etiopia. Ireo no volana eo anelanelan'ny fambolena sy fihotazana, rehefa tsy dia misy sakafo eo amin'ny manodidina. Amin'ity taona ity, mbola kely nóho ny mahazatra ny tahirim-barim-bazaha.
Izany dia satria nandritra ireo taona farany, tsy nanaraka ny zotrany mahazatra ny orana tany amin'ny Tandrok'i Afrika. Nalazo avokoa ny voly. Manambara i Haregewoin fa efa henjana ny mosary, ary anatin'ireo volana maro ho avy, mbola hiharatsy lavitra kokoa izany. Amin'izao fotoana izao, Etiopiana efa ho 10 tapitrisa no tsy mahazo sakafo ara-dalàna ary 4 tapitrisa ireo zaza hatahorana amin'izany.
“Mitodi-doha amin'i Siria avokoa anefa izao tontolo izao ankehitriny, ary hita ho tsy dia tena mavesatra amin'ny ankamaroan'ny olona manerana izao tontolo izao izany,” hoy izy, nampiany fa miezaka manazava ireo krizy ny governemanta Etiopiana sy ireo vondrona sahala amin'i Fandaharan'asa Momba ny Sakafo Eran-tany.
Fantatr'i Haregewoin tamin'ny alàlan'izay hitany nandritra ireo folo taona maro lasa fa tsy miantraika fotsiny amin'ny vatana ny hanohanana, fa amin'ny fanahy ihany koa.
“Misy ireo olona izay tena lasa biby mampatahotra noho ny hanohanana sy ny mosary. Mangalatra, miady ho an'ny sakafo. Ary mety ho lasa olona tena marary saina mihintsy,” hoy ny filazany.
Tamin'izany fotoana izany ihany koa anefa dia nanatri-maso ny famongoran'ny mosary ny tsara indrindra teo amin'ireo mponina sasany ao amin'ny Tandrok'i Afrika izy.
“Tia mizara ny mponina ao Etiopia, izay no kolontsainay,” hoy izy. “Miara-misakafo izahay. Anisan'ny mampivondrona anay ny fizaràna.”
Tato ho ato, nikapoka ny maro tamin'ireo faritra izay tena nianjadian'ny mosary ny tondradrano tampoka, nanjary nampananosarotra ny fandehanan'ireo fiarabe ho an'ireo mila fanampiana.
Nanjary nametraka an'i Etiopia ho eo amin'ny lohan'ny fiovaovan'ny toetrandro ny haintany sy ireo tondradrano.
“Tsy angano akory ny fiovaovan'ny toetrandro, fa zava-misy marina,” hoy ny heviny. “Hitako nandritra ny androm-piainako izany.”
Miaraka amin'ny krizin'ny mosary henjana kokoa hita eny amin'ny faravodilanitra, nihetsika mba hikaroka fanampiana ho an'izay anatin'ny filàna ireo Etiopiana mpila ravinahitra. Nanokatra pejy Go Fund Me (Ndeha Vatsio Aho) izy mba hanohanana ny fanampiana ara-tsakafo. Toy izany ihany koa no nataon'ilay Etiopiana Abraham Debebe avy any Minneapolis. Nifankahita izy roa lahy ary nifanome tànana. Tao anatin'ny herinandro vitsy monja dia nahangona vola maherin'ny 30.000 dolara izy roa.
Saingy lehibe ny filàna, ary ho an'i Haregewoin, tonga ao an-tsainy mialoha foana ny mbola mety hisian'ny mosary mpandrava lavitra kokoa.
“Mieritreritra an'i Etiopia andro aman'alina aho”, hoy izy. “Manahy momba an'i Etiopia aho, miray saina amam-panahy amin'i Etiopia aho.”
Ary izany, hoy izy, no zava-misy iainan'ireo Etiopiana maro mpila ravinahitra, izay mahatsapa ho lavitra ny tanindrazany amin'ireo fotoana ilàna fanampiana.